Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅
Posted: 09/01/2015 11:05 am EDT Updated: 09/01/2015 11:59 am EDT
Dominican Republic – prostitution is legal
Triple Threat — Trio of Hurricanes Hit the Pacific Ocean
ပုံရဲ့..အပေါ်…ညာထောင့်က.. မြေဟာ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာ.. ၄နှစ်ဆက်တိုက်.. သွေ့ခြောက်မှုဖြစ်ခဲ့တာကို.. ဒီလပိုင်းတွေမှာ.. ၂ပြန်တိုး ၃ပြန်တိုးနဲ့.. မိုးတွေလေတွေ.. ရတော့မယ့်..သဘောရှိ..။
The state department released 4,368 emails – totalling 7,121 pages – late on Monday.
ဟီလာရီကလင်တန်အီးမေးလ်တွေကို.. ထုတ်ပြန်နေတာမှာ.. မနေ့ကထုတ်တဲ့.. အစောင် လေးထောင်ကျော်ထဲ.. မြန်မာနဲ့ပါတ်သက်တာ.. ပါလာလို့.. မှတ်တမ်းထားလိုက်တာပါ..။
မုသာဝါဒါကို.. ကမ္ဘာ့လူအများစုဖွင့်တာနဲ့.. မြန်မာတွေဖွင့်တာ.. နှိုင်းယှဉ်စေလို…။
A liar is ….. someone who doesn’t tell the truth.
What happens when (other)someone can’t handle the truth.?
Those are not my own words…
How can we define “what is the truth”?
Facebook ထဲ မှာ ရုရှားမလေးတစ်ယောက် မြန်မာစကား ကို အတော်လေးစိတ်ဝင်စားပြီး
Changing Myanmar moving Forward… တဲ့…။
China vs US vs Myanmar
ယိုးဒယား ဘက် ရောက်သွားရှာတဲ့ မြန်မာမ တွေ မနည်းဘူးဗျ။
New Delhi, Sept. 03 : Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that for the century to be an Asian century, one has to walk in the path of Buddha. He was addressing the Samvad Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance, Environmental Consciousness and Dialogue. Prime Minister Modi and former Sri Lankan President Chandrika Kumaratunga were among the guests at the event. (Read: Narendra Modi: Climate changeamajor concern)
သူရဦးရွှေမန်း ကို ရာထူးကဖြုတ်ချမည့် ကိစ္စ တရုတ် ၃ ရက်ကြိုသိ
အရင်ဘ၀ထဲက သိတယ်ပြောလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား :loll:
Tuesday, 08 September 2015 07:44 Print Email
‘ပုဂံကို ရန်သူတို့ ဖျက်ဆီးသောအခါ အမျိုးလေးပါးသည် စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်၍ အချို့လည်း အောက်အကြေသို့ ပါကြရသည်။ အချို့လည်း အထက်အညာသို့ ပါကြရသည်။
Opposition parties popular on social media, but not at the ballot box: Analysts
ဒီချုပ်အတွက်.. တောင်ပြိုကမ်းပြို.. Landslide victory က.. Plan A ဖြစ်ရမှာပါ..။
ကျွန်မ ကတော့ ဖွတ်အသိုင်းအဝိုင်း မှိုင်းတိုက်တာ ခံနေရလို့လားမသိ။
ဧရာဝတီ| September 16, 2015 | Hits:7,573
အနည်းဆုံး တစ်ခုပဲ ပြောရရင်၊
-၀ီရသူကို ဘာလို့ထောက်ခံနေကျလဲ စဉ်းစားလို့မရ
-ခုချိန်ထိ ၀ီရသူကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးမှမတွေ့သေး … လောဘာဒယ်
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုတယ်လို့ ပြောတဲ့သူက ရူးများနေလားမသိဘူး
ထမင်းစားကြီးတာရော ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးလို့ ပြောမလို့ လင့်ဖွင့်လိုက်မှ တွေ့တယ် အဲ့ထက်ဆိုးတဲ့စကားလုံးကို အများရှေ့မို့ မပြောတော့ပါဘူးလို့
ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး တွေ့နေတာ
ကျုပ်ပါစင်နယ်အမြင်အရတော့.. ဒီဘုန်းဘုန်းက… မဘသဘုန်းကြီးတွေထက်ပိုဆိုးတယ်..။